အောက်တိုဘာလ 2014 - စာမျက်နှာ3- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2014 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 3)
လူသတ်သမားအနာဂတျအတှကျအသစ်ထွက်ရှိမှုများနှင့် Big အစီအစဉ်များနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုဂီတအတွက် Marks 25 နှစ်သီချင်းများ
ထုတ်လုပ်မှုဂီတအထူးကုတစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွက်အမြင့်ဆုံးအမိန့်၏ဂီတထုတ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ စန်တာမော်နီကာ, Calif. -Killer သီချင်းများ, Pre-ရှင်းလင်းထုတ်လုပ်မှုဂီတအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ယခုနှစ် 25 လှည့်နှင့်အကြီးအသစ်ဂီတနှင့်အခြားသော Sonic လုပ်ငန်းဟာ host များလွှတ်ပေးရေးနှင့်အတူကြီးမားတဲ့လမ်းအတွက်ကျင်းပနေပါတယ်။ အသစ်ထွက်၏များစွာကုမ္ပဏီအစီအစဉ်များအနက် ...
တူရကီခုနှစ်တွင်၎င်း၏ဖြန့်ဖြူးထားသကဲ့သို့ CueScript အမည်များ Mavi Grup Iletisim
တူရကီ, တူရကီ, အောကျတိုဘာ 27, 2014 - CueScript, ရှိသမျှထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် Feature-rich ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူဖန်တီးမှုချက်ချင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးသူ, က Mavi Grup Iletisim နဲ့ဖြန့်ဖြူးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟုကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်။ ထိရောက်သောချက်ချင်း, Mavi Grup Iletisim တူရကီအားလုံးကို CueScript ထုတ်ကုန်များအတွက်ဖြန့်ဖြူးအခွင့်အရေးများယူဆတယ်။ Mavi Grup Iletisim ၏ထို့အပြင် CueScript ရဲ့အပျေါမှာတညျဆောကျပါလိမ့်မယ် ...
ပါပလော '' တစ်ဦးသည် သာ. ကောင်း၏ရာဌာန 'မှဒစ်ဂျစ်တယ် Jungle ကြာ
Los Angeles မြို့-based post ကိုအိမ်, Quantel အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဟောလိဝုဒ် post ကိုအိမ်သူအိမ်သားနှင့်အတူ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုပွဲဦးထွက်စေသည်ဒစ်ဂျစ်တယ် Jungle Post ကိုထုတ်လုပ်မှု, ကရှိပါတယ်ရာများအတွက်ပထမဦးဆုံးအင်္ဂါရပ်အရှည်ရုပ်ရှင်လွတ်လပ်သောဒရာမာ-စိတ်ကူးယဉ် '' တစ်ဦးသည် သာ. ကောင်း၏ရာဌာန 'ပေါ်တွင် post ကိုထုတ်လုပ်မှုပြီးစီးခဲ့ပါသည် ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုနှင့် post-ထုတ်လုပ်မှုကိုင်တွယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် Jungle ပုညီ, အရောင်ဆုံးမခြင်းနှင့် 100 VFX ရိုက်ချက်များကျော်ပြီးစီးခဲ့ ...
Miller ကအရည်ခေါင်းဆောင်များ (ဥရောပ) Ltd SATIS 70 မှာ၎င်း၏ Cineline 2014 အရည်ဌာနမှူးနှင့်အတူတာဝန်ခံယူ
ပဲရစ်, ပြင်သစ်, အောကျတိုဘာ 27, 2014-Miller ကအရည်ခေါင်းဆောင်များ (ဥရောပ) Ltd, ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, SATIS 70 (ရပ်မှာပြင်သစ်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ဆက်သွယ်ရေးစျေးကွက်မှ၎င်း၏အဆင့်မြင့် Cineline 2014 အရည်ဌာနမှူးတခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထား D17) ။ ရည်ရွယ်ချက်-built ရုပ်ရှင်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုရိုက်ကူးရေးအဘို့, Cineline 70 နယ်ခြားမုခ်အပေါ်နေဖို့လိုသူမြားအတှကျဖြစ်ပါတယ် ...
နျူမန် "collector Edition ကိုဦး 47 fet" အဖြစ်က၎င်း၏ဒဏ္ဍာရီဦး 47 fet ငွေ့ရည်ဖွဲ့မိုက္ကရိုဖုန်း Reissues
ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး - 27 အောက်တိုဘာလ, 2014 - အ 1960s နှင့် 1970s ဂီတ၏သမိုငျးတှငျအမြားဆုံးဆန်းသစ်ကာလတစျခုဖွစျဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ ဒီရှေ့ဆောင်အချိန်အတော်များများသည်အသံသဘောတရားများကိုလက်ရှိပွနျလညျရှာဖှတှေ့လျက်ရှိသည်နှင့်အကြီးအသန့်စင်အဖြစ်မှတ်ကြသည် - အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံကမ်ဘာပျေါတှငျ။ မတူညီတဲ့၏စတူဒီယိုနည်းပညာများတို့တွင်ဆက်စပ်မှုတွေ ...
Bexel Reality TV ကိုအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ဦးက New ရာသီထောက်ပံ့
အဆိုပါကျဆုံးခြင်းရုပ်မြင်သံကြားရာသီထွက်မိတ်ဆက်အဖြစ်, အဖြစ်မှန်ပရိုဂရမ်းမင်း၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်း Bexel ကထောက်ခံလျက်ရှိသည်တစ်ဦးဦးဆောင် - "အဆိုပါအလုပ်သင်," ကုမ္ပဏီက Non-Scripted ရှိုး (။ BURBANK, ကာလီဖိုးနီးယား) ၏ Host ကအတှကျန်ဆောင်မှုများပေးရန် "ကုန်တယ်" မှ ထုတ်လွှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပံ့ပိုးပေး။ Bexel အပါအဝင် Non-scripted ပရိုဂရမ်းမင်း၏အဘယ်သူသည်င်သူတစ်ဦးတကယျ့အပေါ်နောက်ကွယ်မှတွေ့နိုင်ပါသည် ...
အဆိုပါဝေါ့ဒစ္စနေးကုမ္ပဏီ, Panasonic Dolby Laboratories SMPTE Centennial ကင်ပိန်းလုပ်ဖို့တိုက်ထောင့်လှူဒါန်းမှုများ Make
အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Centennial ပွဲ၏အသိအမှတ်ပြုခုနှစ်, SMPTE Next ကိုရာစုရန်ပုံငွေအဖွဲ့, အသင်းဝင် Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများစံချိန်စံညွှန်းကိုပံ့ပိုး, နှင့်ပညာရေးအစီအစဉ်များတွင် Los Angeles လိမ့်မည် - အောက်တိုဘာ 23, 2014 - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (R) ၏အသငျး (SMPTE (R)) အဆိုပါဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့အဆိုပါဝေါ့ဒစ္စနေးကုမ္ပဏီ Panasonic ကကြေညာခဲ့သည်နှင့် ...
CAPER 2014 မှာ Display ကိုအပေါ် Primestream ထုတ်ကုန်:
BVS နှင့်အတူ CAPER 2014 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview Primestream ရပ် H-50 အပေါ်အောက်တိုဘာ 29-31 ချိတ်ထုတ်လုပ်မှု Suite v4.6 မှာ CAPER 2014, Primestream (R) ချိတ် (TM) ထုတ်လုပ်မှု Suite v4.6 သည်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သူ့ရဲ့ကောင်းချီး software ကိုပလက်ဖောင်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုပြသပါလိမ့်မယ် အရှုပ်ထွေးဆုံးထုတ်လွှင့် Workflows ၏အလိုအလျောက်။ အသစ်က module တွေ, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, နှင့်ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲရောင်းချသူနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်း, လမ်းဆုံလမ်းခွ v4.6 နှင့်အတူ ...
ARRI Alexa IBC 2014 Showreel ...
The highlight of broadcast trade shows such as NAB and IBC is always the camera manufacturers showreels. This year ARRI makers of the Alexa, and Amira cameras, put together the best selection of co… Source: cinescopophilia.com See on Scoop.it – Broadcast Engineering
CCW 2014 မှာ Wohler ထုတ်ကုန်များ
CCW 2014 Nov. 12-13 Wohler Technologies Product Preview Booth 701 Tachyon(R) Wormhole(TM) Media Retiming The award-winning Tachyon(R) Wormhole(TM) file-based media retiming solution enables up toaplus or minus 10 percent runtime adjustment while preserving not only video and audio quality, but also closed caption integrity. Based on Cinnafilm’s popular Tachyon algorithms and the Wohler RadiantGrid Intelligent Media Transformation Platform(TM) ...
ဒါရိုက်တာ Mark အင်ဒရူး Madheart ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Los Angeles-Madheart သီးသန့်အမျိုးသားရေးကိုယ်စားပြုမှုများအတွက်ဒါရိုက်တာ Mark အင်ဒရူးလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဒရူးထိပ်တန်းစီးပွားဖြစ်ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ် 20 နှစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြီးနောက်အရေးယူလမျးညှနျခနထေိုငျအားမိမိအာရုံကိုလှည့်သူကိုဖက်ရှင်နဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကြော်ငြာတစ်ခုအထူးကုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအတိုက်ရိုက်အရေးယူအလုပ်အမေရိကန်လင်းယုန်, Aeropostale, Target, 7th မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ, Olay, ယာဉ်ကြော Bryant နဲ့အမေရိကန်ကင်ဆာ Society ၏ရေနံအဘို့စီမံကိန်းများပါဝင်သည်။ ...
အဆိုပါ 21st HPA Tech မှသီးသန့်အဘို့အမှတ်ပုံတင်ခြင်း Now ကိုဖွင့်ပါ
အဆိုပါ Bellwether Entertainment ကနည်းပညာဖြစ်ရပ်ကိုအဆိုပါဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (HPA (r), ကိုတရားဝင်ဖွင့်လှစ်သည့် 2015 HPA Tech မှသီးသန့်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ကြေးအားဖြင့်ထုတ်လုပ် SMPTE စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာယနေ့တွင်အိန္ဒိယဝဲလ် (Los Angeles မြို့,, CA) ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ 21st နှစ်ဆက်တိုက်တစ်ဦးသည် အင်ဂျင်နီယာ, နည်းပညာ, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်မဟာဗျူဟာစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာခေတ်ရေစီးကြောင်းဆွေးနွေးရန်တော၌စုဝေးစေမည်သူကိုဖွင့်တဲ့သူတကယျ့နှင့် ...
အဖွဲ့အစည်းက, အလန် Heim, ACE အားနှင့် Randy Roberts သည်, ACE အားတစ်ဦးချင်းစီအဖှဲ့အစညျးရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ထူးတစ်ဦးလက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်သည့် Careers နှင့်သြဇာအယ်ဒီတာများ (Los Angeles မြို့,, CA) ၏အလှူငှမြေားဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (r) (HPA) သိလိမျ့မညျ အဆိုပါတစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဆုချီးမြှင့်။ ဒါရိုက်တာ၏ HPA ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ကော်မတီသည်ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အထူးဆု, ရန်တင်ပြကြသည် ...
FOR-တစ်ဦးက Switcher Multi-ကြည့်ရှုသူများသည်, Encoding / ဒီကုဒ်ဒါနှင့် CAPER 2014 ဖို့ signal processing Solutions များရရှိစေ
ထင်းရူးပင်,, CA - FOR-တစ်ဦးကအမေရိကလာမည့် CAPER ရှိုးမှာက၎င်း၏ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်အတော်ကြာပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြပွဲအောက်တိုဘာလ 29-31 ကနေ Buenos Aires, အာဂျင်တီးနားအတွက်ရာအရပ်ကိုကြာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်, cable များနှင့်ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားအဖြစ်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ရေဒီယိုစျေးကွက်အပေါ်အာရုံစိုက်။ FOR-တစ်ဦးကအဆိုပါ SVC အတွင်းက၎င်း၏ကဗီဒီယိုခလုတ်, ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်, ဆစ်ဂနယ်များနှင့်မြင်ကွင်းစုံဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ...
Eurovision အမေရိကတိုက်ကို IEEE BTS ဒီဇင်ဘာလတွင်သင်တန်းက 'Gap ပေါင်းကူး' 'ဝေငှရန်
အဆိုပါအသံလွှင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အထွေထွေပြည်သူ့မှပွင့်လင်းခြင်း, သင်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲရာဌာနကိုယူတော်မူမည်ဝါရှင်တန်ရှိဒီဇင်ဘာ 8-9, DC က PISCATAWAY, NJ - အောက်တိုဘာ 22, 2014 - အကို IEEE အသံလွှင့်နည်းပညာလူ့အဖွဲ့အစည်း (BTS) ယနေ့, ထို Eurovision အမေရိကတိုက် Inc ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ဥရောပအသံလွှင့်ယူနီယံ (EBU) ၏အမေရိကန်လက်မောင်းသည်, လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ "ဟုအဆိုပါ Gap ပေါင်းကူး" သင်တန်း၏နောက် session ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် ...
3 ၏စာမျက်နှာ 10«12345	»	...နောက်ဆုံး»